30kii maalmood ee aan xaaskayga xambaaray – Qaybta 5 | Somaliska
Maanta waxaan qaadaneynaa qeybtii ugu dambveysay ee sheekadii xiisaha badneyn“30kiimaalmood ee aan xaaskayga xambaaray” Qeybtii hore waxaad ka akhrisan kartaa halkaan. Osman ayaa sheekadii meeshii aan ku dhaafay nooga sii wadaya
Baabuurka ayaan ku dhacay oo waxaan toos u abaaray xafiiskii. Waxaan u degdegayay waayo waxaan ka cabsanayay in aan isbedel sameeyo. Aniga oo aan baabuurka daaqadaha u xirin ayaa degdeg uga degay oo waxaaba irida ii dhoola cadeyneysa Deeqa oo aad moodo in ay sugeyso go’aan muhiim ah maanta. Waxay isku dayday in ay igu soo dhawaato markaas ayaan gacanteeda intaan qabtay ayaan ku iri “I dhageyso Deeqa ma doonayo in aan xaaskeyga furo”
Waxay u qaadatay hadalkeyga in uu kaftanyahay maadaama aan mudo dheer isla qorsheynay nolosha aan wada dhisi doono marka aan xaaskeyga furo ka dib. Intay ii soo dhawaatay ayay igu tiri “kaftantanka iga daa gacaliye”.
Markaas ayaan cod dheer ku qayliyay “Ma doonayo in aan furo xaaskeyga. Guurkeyga waxa uu ahaa mid caajis ah sababtuna waxay ahayd in aniga iyo xaaskeyga aan ilownay waxyaabaha yaryar ee nolosha farxada geliya oo aan xooga saarnay guri iyo lacag oo keliya. Hada ayay ii cadaatay in uusan jacaylkeena dhamaan balse aan u baahanahay in aan isku soo dhawaano oo keliya. Maanta ka bilaabata nolosheeda inta ka dhiman waan xambaarayaa”.
Markaas ayaa waagii ku baryahay. Intay dharbaaxo igu dhufatay ayay ka dibna albaabka soo xiratay oo oowin ku dhufatay. Xiiso dambe iguma hayn ee waxaan toos ugu laabtay baabuurkii, dukaanka ubaxa lagu iibiyo ayaan sii maray oo aan ka dalbatay in ay ii sameeyaan ubax kuna qoraan “Subax kasta waxaan ku xambaarayaa ilaa geeri nakala geyso”.
Gurigii ayaan ku laabtay oo xaaskeygii meeshii aan kaga soo tagay ayay igu sugeysaa. Markaas ayaan habsiiyay oo ubaxii gudoon siiyay. Farxad iyo reyn reyn ayaa nooga dambeysay maalintaas.
Nuxurka sheekada: Sheekadaan nuxurkeedu waa in lamaanayaasha isqaba kuwa cusub iyo kuwa mudada wada joogay ay xasuustaan in qiimaha guurku uusan ahayn guri weyn oo la dhiso iyo lacag badan oo la tabco. Qiimaha guurka iyo farxadiisu waxay ku qirantahay in la qiimeeyo waxyaabaha yaryar ee farxada abuura. Waxaan kale oo sheekada ka milicsaneynaa muhiimada ay leedahay isku soo dhawaashaha lamaanaha. Labada lamaane oo kala dheeraada waxay abuureysaa in rabitaankooda uu yaraado.
Muhiimadu waa in aad saaxiib la noqoto lamaanahaaga oo aad wada sameysaan waxyaabaha yaryar ee dadka badankoodu ay gees maraan. Nolol farxad leh kuwada noolaada.
Insha Allah waan sii wada doonaa sheekooyinka nuucaan oo kale ah.
shekadan aniga ayeyba si tos ah i tabane
waad mahadsantihiin bahda somaliska and jimcaale shekadaan bilaaaw ilaa dhamaad waanla socday markii hore waaan ka xumaday lakin qeeybaheedi danbe waan kahelay gabadhu markeey laheed ninkeeda i xanbaar ujeedo dheer beey kalaheed intii soo diyaarisay sheekadaan iyo intiila socotayba iyo webka somaliska all thnks
wlh waa sheeko aad uxisabadan inkasto dhamaad iyo billowba an lasocday hadana qayrbihi hoore waa kaxanaqsanay kkk lkn qaybta danbe adbay icajabisay iskusooduboo shekadan kuligeedba aadbay umacaneed qab ad umacana way kudhamatay sheekoyin kalena waa kasugaynaa aad iyo ad ayana umahadsantahay
Cayni cadey says:
Asc dhaman inta diyaarisay & inta ku tixanbo thnks alot .waa sheko qatar ah waanbo ka helay o waa qof caqli badan gabadha ixambaar waxey aheyd ujeedo sarbeeb ah qof kasta ma fahmi karo lkn ugu dambenti wey guuleysatay
Asc wa ni slamay dhaman bahda somlska .com shekadan hada dulmaray run ahantine nagta wa nag karti leh adkeysi iyo dulqadbo leh ma nin wa ku fura i dhaho sbb xita ma weydye i fur a oran laha lakn ayada masha alh waxe ka fkrte ayaheda danbe wana ku guleste haweno iska dadala
March 24, 2012 at 13:37
cajiib shekadaan hada ayaan wada aqriyay waa sheko marka hore ka ilmeyneyso kadib lakiin waxan daremay isbadal waa tusaalo aad u wanagsan oo u bahan in bulshada lagu tusaleyo aad baan idinku mahad celineynaa inta soo diyarisay iyo wabka somaliska iyo wayiyaha waqtiga ku bixiyay all thnks